Iza no manao Forex - Best Forex EA | Expert Advisors | FX Robots
HomeForex SchoolIza ny mpivarotra Forex
Iza no manao Forex? Liquidity & Participants
Ny habeny sy ny fitomboan'ny Forex
Miaraka amin'ny volan'ny varotra mihoatra ny $ 4 trillion isan'andro, Forex no tsena lehibe indrindra sy tsiroaroa indrindra eto amin'izao tontolo izao. Raha ny marina, ny volan'ny varotra Forex dia avo loatra ka tsy misy angona azo ampiasaina, na dia telo taona monja aza ny BIS (Bank of International Settlements) dia mamoaka ny vokatry ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpandray anjara lehibe ary namorona sanda azo avy amin'ny valim-pikarohana.
Tandrefana mivelatra amin'ny varotra ivelany, amin'ny fitaovana
Avoakan'ny salan'isa isan'andro amin'ny Aprily, an-davitrisa dolara amerikana
Fitaovana fifanakalozana vahiny 1,527 1,239 1,934 3,324 3,981
Sarin'ny Spot 598 386 631 1,005 1,490
Ara-drariny 128 130 209 362 475
Money Swaps 10 7 21 31 43
Safidy sy vokatra hafa 87 60 119 212 207
Loharano: Tsiambaratelo Central Bank, 2010
Ny latabatra etsy ambony dia mampiseho ny fiovan'ny isan-taona haingana amin'ny volon'izao tontolo izao isan'andro amin'ny dimy ambin'ny folo taona lasa, mitombo avy amin'ny 0.8 trillion ao 1992 ka 3.9 trillion nataon'i 2010, mitombo avo telo heny ny habeny. Marihina fa nitombo be ny Forex hatramin'ny nanakatonan'ny Filoha Nixon ny varavarankely volamena ary ny vola no navela nandalo vola hafa sy ny mpitsikitsikitsoka afaka nahazo tombony tao. Saingy ny tena "fifamoivoizana volamena" amin'ny fifanakalozana ara-bola dia nitranga tamin'ny taona 10 farany, noho ny internet, ny Euro vaovao, ary ny fomba famonoana elektronika vaovao dia nampihena ny vidin'ny fifanakalozana ary nitombo ny fidiram-bola tamin'ny tsena. Samy samy mahatsapa ny mpivarotra lehibe na kely fa ny Forex dia haingana lasa arena varotra sy mahavariana ary lafo kokoa ny volavolan-dry zareo ao anatiny.
Ny fametrahana ny volavolan-tseraseran'ny $ 4 trillion isan'andro amin'ny fomba fijery, dia ny 100 isa avo lenta mihoatra ny fifanakalozam-bola rehetra. Ary raha ampitahainao amin'ny $ 25 arivo tapitrisa ny volan'ny New York Stock Exchange, dia manontany tena ianao amin'ny maneso ny fomba itiavanao ireo tahiry be dia be, raha ny Forex kosa dia hevi-dehiben'ny ankamaroan'ny olona.
Inona no tombontsoa azonao omena an'ity volavolan-dàlana tsy mampino ity isan'andro?
Izahay, mpivarotra antsinjarany, dia mahazo tombony telo avy amin'ny fananana io tsena io no lehibe indrindra sy faran'izay betsaka indrindra eto amin'izao tontolo izao:
Famoahana tsy misy fepetra: Ny dikan'ny hoe liquidity avo lenta dia mameno avy hatrany ny famonoana azy. Min delay.
Fanatanterahana amin'ny vidiny efa nampoizina: Ny vola liquidity avoakany dia midika ho fenoina amin'ny vidin'ny vokatra. Fialamboly kely (Ankoatra ny fampandrenesana vaovao lehibe).
Tsy misy fikambanana afaka hifehy na mifindra ny tsena.
Raha Forex dia lehibe, Nahoana no tsy fampiharana Forex toy ny tsenam-bola?
Antony roa. Tsy antitra, ary vao haingana izy io no nahazo ilay mpivarotra "fivarotana".
Voalohany, ny fanombantombanana lehibe momba ny maimaim-poana Ny fifanakalozana fifanakalozana sandam-bola dia orinasa orinasa vaovao vaovao, manomboka bebe kokoa amin'ny 1971 taorian'ny fiparitahan'ny rafitra monetikan'i Bretton Woods izay nanambatra ("namboarina") ny vola lehibe amin'ny Dolara amerikana (izay azo lazaina fa azo niova ho volamena ). Tamin'ny Aogositra 1971, Nixon dia namarana ny fiovam-po ho volamena, izay namarana ny rafitry ny rafitra "26-1945" 1971-XNUMX), izay namerina ny vola niova indray. maimaim-poana Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza Ny New York Stock Exchange (NYSE) dia nifanohitra hatramin'ny volana Mey 17, 1792, izay nanome azy ny fiandohan'ny lohataona 179 +.
Ankoatr'izay, na dia misy aza ny fanombantombanana maimaim-poana Ny vola miparitaka dia efa hatramin'ny taona 1971, tsy tamin'ny 1996 izay mety hampivarotra azy io ny mpanjifa (mpivarotra). Ireo manan-karena indrindra, toy ny banky sy ny vola hividianan-dry zareo no nahafahany nanakalo izany. Saingy tsara ho antsika fa misy ny fiovana izay mamela antsika hiditra ao amin'ny klioban'ny lehilahy manankarena taloha. Nosoratan'i 1998, nitombo ny lazany ny internet ary izany no nahatonga ny mpivarotra maro hanokatra ny fivarotana an-tserasera ary ahafahan'ny mpivarotra kely kokoa miditra amin'ny varotra elektronika ny mpivarotra vola vahiny.
Noho izany Forex dia vaovao vaovao ho an'ny mpivarotra kely kokoa, ary raha mbola imbetsaka sy mihamitombo haingana kokoa noho ny tsenam-bola ny vola, dia ho elaela vao ho fantatra.
Iza ny mpivarotra Forex?
Tato anatin'ny folo taona lasa izay, ireo mpandray anjara fototra amin'ny tsenan'ny Forex dia ireo banky ara-barotra izay naka toerana tamin'ny banky hafa noho ny antony samihafa (fanombantombanana, hedging, sns.), Ary ny orinasa (mpanondrana sy mpanondrana entana sy serivisy) dia hampiasa banky ho an'ny fifanakalozana vahiny. Ny zava-drehetra dia nahakasika ny 70% amin'ny volan'ny ankapobeny navoaka tamin'ny Forex.
Amin'izao andro izao anefa, niova ny tsena. Amin'ny fampivoarana ara-teknolojika vaovao sy ny fahaiza-mitantana ny fifanakalozam-bola any ivelany, mora kokoa ny andrim-panjakana hafa, ary koa ny mpampiasa vola sy mpivarotra.
Androany ny fanombantombanana dia mitazona mihoatra ny 95% amin'ny asa atao isan'andro, izay midika fa ny ankamaroan'ny mpividy mividy vola dia tsy manana fikasana handray izany vola manokana izany. Ireo fifanakalozana ireo dia atao amin'ny banky ara-barotra ho an'ny mpivarotra tsirairay.
Ny mpandray anjara lehibe amin'ny Forex dia: banky, foibe banky, orinasa ara-barotra, fefy vola, ary mpivarotra, ary ny tena antony mahatonga azy ireo handray anjara amin'ny tsena Forex dia:
Ny tombony amin'ny fiovaovan'ny fifandanjana ara-bola, ary ny tombantombana
Fiarovana amin'ny vondron-drivotra mirona, avy amin'ny varotra sy ny varotra varotra, hedging
Ny tombony avy amin'ny fampivoarana vokatry ny fahasamihafana amin'ny zanabola
Misy banky lehibe sy kely an-jatony mandray anjara amin'ny tsena Forex amin'ny antony manosika ny alahelony amin'ny fifanakalozam-bola vahiny sy ny an'ny mpanjifany, ary koa hampitombo ny harenan'ny tompony. Ny banky tsirairay, na dia samy hafa aza ny fikarakarana, dia manana birao miandraikitra tompon'andraikitry ny famonoana, famokarana, ary ny fitantanana ny risika. Ny andraikitry ny birao dia mety hahatonga tombony amin'ny fifanakalozana mivantana amin'ny alàlan'ny hedging, arbitrage, na karazana paikady hafa.
Misy banky lehibe 25 izay mitaky ny ankamaroan'ny volavolan-dalàna, izay ahitana ireo folo avo indrindra hita eto ambany ao amin'ny latabatra:
Zara tsena 2012%
Fiovana Pct YoY
Anarana Bank 1 14.56% -6.91%
Sary nahazoan-Suisse 8 4.68% -2.50%
Ny tsenan'ny mpanelanelana ambony ambony amin'ny banky dia mitazona ny 53% amin'ny fifanakalozana rehetra. Aorian'izy ireo dia misy banky kely kokoa, arahin'ny orinasam-panjakana maromaro (izay mila manao lozam-pifamoivoizana sy mandoa vola amin'ny mpiasa any amin'ny firenena samihafa), vola midadasika lehibe, FX mpanamboatra tsena.
Ny banky matetika dia mipetraka eo amin'ny tsenan'ny vola arahin'ny fomba fijery manokana momba ny tsenan'ny tsena, ary ny mampiavaka azy amin'ireo mpandray anjara tsy banky dia ny fampahalalam-baovao tokana tokana momba ny fivarotana sy ny fivarotana ny mpanjifany amin'ny fotoana mety, izay dia manome azy ireo fahalalana bebe kokoa momba ny fividianana sy fivarotana ny vidin'ny fifanakalozana. Saingy tombontsoa manokana izany tombony izany, satria tsy misy banky lehibe noho ny tsenam-barotra, ary ny banky dia sahiran-tsaina amin'ny fihetsika goavana manohitra ny fanirian'ny tsenan'ny tenany manokana sy ny hivarotan'ny volany.
Ny tsenan'ny mpanelanelana dia fomba mahavariana milaza fa mifampiraharaha ireo banky ireo, tsy misy toerana tsena midadasika. Ny tsena mpanelanelana dia azo takarina tsara amin'ny resaka tambajotra iray misy banky sy orinasam-bola izay mifandraika amin'ny loha-pandehanany, mifampiraharaha ny tahan'ny fifanakalozana. Ity tsena iraisam-pirenena ity dia efa nisy nandritra ny taona maro. Na izany aza, tao amin'ny 90 dia nisy andiana fisehoan-javatra nipoitra (fanilikilika, aterineto, fitohizan'ny tambajotra varotra elektronika sy ny rafitra mifandraika amin'ny tambajotra) izay nahafahan'ireo mpivarotra sy mpikarakara handray anjara amin'ny tsenan'ny banky ho antsika, mamela antsika hanararaotra vaovao azo sintomina ao amin'ny sehatra fifanakalozana ara-toekarena izay manome fampiasam-bola ambony, ambany ambany, ary 24 / 7 varotra.
Ny banky afovoany dia mpilalao lehibe ao amin'ny tsena Forex, na dia ny antony lehibe noraisiny aza dia tsy natao hahazoana tombony, fa hanamora ny politikan'ny volan'ny governemanta (ny fanomezana sy ny vidin-tsolika) ary mba hanamafisana ny fahasamihafana amin'ny sandan'ny volany (zanabola).
Ny banky foibe dia afaka miditra amin'izany noho ireto antony manaraka ireto:
Mba hamerenana ny toeran'ny vidin'ny varotra
Mba hiarovana ny isam-barotra sasany amin'ny fifanakalozana vola avy amin'ny matanjaka fironana na tsy fitoviana
Raha tanjona ny tanjona ara-toekarena (vidim-piainana, fitomboana, sns)
Ny banky foibe sasany dia mafana fo kokoa noho ny hafa; Ny sasany dia miditra matetika (toa ny Banky foibe Japoney).
Ny banky foibe manan-danja indrindra dia:
Ny Federal Reserve (banky foibe amerikana)
Ny Banky ny Japana
Ny Bank of England
Ny Bank of Canada
Ny Banky nasionaly Swiss
Ny Central Bank of Europe
Ny Banky Reserve of Australia
Ny fidirana amin'ny banky Central dia afaka manamboatra karazana: 1) mivantana mividy mivantana mba hanosehana ny vidiny ambony na mivarotra mba hanosehana ny vidiny; 2) manosika ny fihenam-bidy hanamafisana ny vola, midina mba hampihena azy; ary 3) miditra an-tsena ary manamarika fa ny fisorohana dia azo atao, amin'ny fanehoan-kevitra amin'ny haino aman-jery momba ny lanjany ho an'ny vola, izay matetika lazaina ho dingana ho an'ny hetsika ofisialy (antsoina hoe "jawboning").
Amin'ny toe-javatra faran'izay ratsy, ohatra, aorian'ny matanjaka fironana na tsy fitovozana amin'ny taham-pifanakalozam-bola, mandinika ny lahatenin'ny banky foibe sy ny hetsika, raha toa ny fitsabahana azo atao amin'ny fikasana hanodina ny tahan'ny fifanakalozam-bola ary hamongorana ny vola fironana napetraky ny mpikatroka. Ohatra, ny Banky National Bank (SNB) sy ny Bank of Switzerland Japana dia samy niditra an-tsehatra tao amin'ny tantara vao haingana izay mamorona hetsika goavana eo amin'ny tsenan'ny vola. .
Businesses sy orinasa
Orinasa goavana sy madinika (avy amin'ny orinasa madinika / mpanondrana any amin'ny orinasa maromaro, orinasa maromaro) no mandray anjara amin'ny Forex mba hividianana entana sy serivisy any ivelany, vahaolana amin'ny fahasimbana, ary ny karaman'ny mpiasa any amin'ny firenena samihafa. Ny ankamaroan'ny orinasa dia te-hividy amin'ny volany any an-tranony na dolara amerikana mba hamenoana ny raharaham-barotra ilainy hahazo vola vahiny amin'ny banky ara-barotra. Antony hafa ho an'ny orinasa ara-barotra mety handray anjara amin'ny tsenan'ny Forex dia ny hampihena ny fijery azy; ohatra, raha toa ny orinasa handray ny vola amin'ny ho avy ao an-tranony, ary efa mendri-kaja ny vola, ny orinasa dia mety handalo (hamidy) ny vola an-tanindrazany ary mandehana (mividy) ny vola hafa amin'ny isa mitovy ny fandoavam-bola izay raisina, ka manalavitra ny mety hisian'ny fitomboana vidin'ny vidiny.
Hedge Funds sy Investment Management Investment Company
fefy vola dia mpikarakara vola iraisam-pirenena sy tompon-trano, ary afaka manao varotra an-jatony an-jatony izy ireo, satria ny sehatry ny fampiasam-bola no tena lehibe. Ny lanjan'ny harin-karenan'ny fiantohana dia afaka mihazakazaka ho an'ireo an'arivony tapitrisa, ary mbola avo kokoa ny tahiry entona raha mbola mitombo sy mitebiteby. Ireo manampahefana dia mampiasa vola ho an'ny mpanjifa isanisany, toy ny vola fanampiana ara-bola, orinasa fiantohana, vola iraisam-pirenena, mpanankarena mpanankarena, governemanta ary banky foibe. Ny dobo fampiasam-bola ataon'ny governemanta fantatra amin'ny anarana hoeharena mpanankarena (SWF) dia nitombo haingana nandritra ny taona faramparany, ny sasin-tsarimihetsika sasantsasany momba ny fametrahana ny fampiasam-bola ratsy Wall Street bola ara-bola. Ireo vola hetra ireo dia manana anjara lehibe amin'ny tsenam-bola amin'ny ankapobeny, ary FX indrindra fa ny 2000s, ary ny fivoarany sy ny varotra ataony no manjary antony mahatonga ny 80% ny fifanakalozam-bola amin'ny fifanakalozana.
Ny tombontsoa avy amin'ny fifanakalozana vahiny toy ny fampiasana ny liquidity ary ny vidiny ambany dia mamorona tontolo iainana miavaka ho an'ireo mpandray anjara be dia be. Ny sehatra fananganana hetra ho an'ny Forex dia tonga hampihatra ny fiantraikany bebe kokoa amin'ny fironana ara-bola sy ny soatoavina rehefa mandroso ny fotoana. Izy ireo dia singa tena manosika ny tsenam-bola, mividy na mivarotra vola goavana midina (herinandro) mankany amin'ny fotoana lava (volana na taona), ary ny fivarotan-dry zareo indraindray dia manamaivana ny tsena, mitaky fanitsiana ny vidin'ny fanodinana ny fangatahana sy ny fanomezana. Ohatra, ilay miliaridera George Soros (sary etsy ambony) dia nahatonga ny varotra FX, ary ny tahiry Quantum dia nahazo laza malaza ho an'ny fanombatombanana hatramin'ny 1990. Nampangaina ho nampihena ny tsindry tamin'ny vola ny tahirim-bola mba hanampiana mivantana ny tetikadiny manokana: Ny Praiminisitra Maleziana Mahathir Mohamad teo aloha dia nanome tsiny ny famoahana ny fanonganam-panjakana Maleziana ao amin'ny 1997 amin'ny George Soros. George Soros dia niaro fa nanararaotra ny fahalemena malaza ao amin'ny rafitra ara-bola iraisam-pirenena izy. Ny fanoherana dia ny hoe ny firenena sasany sy ny mpitarika azy dia mety hiteraka blasfim-bola tsy hay tohaina na raha tsy izany dia mandika ny volam-pirenena, ary FX Ireo mpikatroka dia miteraka haingana kokoa ny fianjeran'ny tsy fahampian-tsika fa tsy mamela azy hijanona ela sy ho lehibe kokoa.
Ny mpivarotra madinika dia antsoina hoe mpivarotra antsinjarany, mifanohitra amin'ireo mpivarotra eo amin'ny asam-panjakana, ary na dia ny fandraisanay anjara amin'ny FX Mihamitombo ny tsena amin'ny taona 10 farany, mbola misy ny 2% amin'ny ankapobeny FX ny volan'ny tsenam-barotra, miaraka amin'ny volan'ny varotra isan'andro eo amin'ny $ 50-60 miliara.
Misy tombony roa amin'ny maha-trondro kely azy ao amin'ny dobo lehibe: ireo mpandraharaha ara-barotra lehibe dia manampy amin'ny vidin'ny liquidity, ary ny haben'ny vidy kely dia manome fahafaha-manao bebe kokoa ho an'ny fanamainana. Efa nanamarika ny tombony ho an'ny liquidity isika: famonoana mivantana sy mangarahara. Mahaliana koa ny manamarika ny fahaiza-manao. Satria ny ankabeazan'ny fotoana sy ny tahan'ny fampiasam-bola dia matetika no fohy kokoa, ary tsy misy fiantraikany amin'ny fangatahana / famatsiam-bola mitovy amin'ny aggregate, ny modely ara-barotra sy ny tahiry ambany dia mamela antsika hanana flexibilite bebe kokoa hiditra sy hiala ny tsena. Na izany aza, tokony voamarika fa ny mpividy sy ny banky dia mamela malalaka bebe kokoa amin'ny mpanjifa lehibe kokoa, izay manome azy tombontsoa sarobidy tsy ananantsika.
Amin'izao fotoana izao no ahitantsika tombontsoa azo atao amin'ny maha-kely (fidiram-pahaiza-miditra mafimafy kokoa sy mivoatra), dia zava-dehibe ny manasongadina ny tsy fahampiantsika: satria isika no trondro kely amin'ity dobo ity, Ary tena mahavariana tokoa, isika no malaky mihinana. 95% ny mpivarotra antsinjarany very. Ny mpivarotra lehibe (banky, orinasa ary vola hedge) no antsantsa ao anatin'ireny rano ireny, raharaham-barotra andro aman'alina, mahafantatra ny tsena sy ny tsena amin'ny tsena izy ireo ary mihinana ny osa. Mampiasa fomba amam-panao izy ireo varotra rafitra izay mamono ireo mpivarotra tsy mahomby ireo izay mety hametraka ny baiko mitandrina amin'ny fanohanana sy ny fanoherana mazava. Ny mpivarotra vaovao dia mety hanaraka ny sekolim-pahaizana malaza indrindra amin'ny fanadihadiana fototra na ara-teknika, ka noho izany dia matetika izy ireo no hita sy ampiasain'ny antsantsa. Ny brokers sasany dia mamoaka ny tahirin-tsolika ao an-tokantranony mba hanatsarana ny vola nomena amin'ny fotoana rehetra, antsoina hoe fihetseham-po, ary satria fantatr'izy ireo fa ny ankamaroan'ny mpivarotra isan-karazany dia very, ny tolo-kevitra dia ny hividianana fifanoherana amin'ny fihetseham-po mivantana na fitarim-pifanampiana.
Mba hahafahan'ny mpivarotra antsinjarany hisoroka ireo mpivarotra lehibe, dia tokony hisoroka ny fanarahana ny iray amin'ireo hetsika vaovao farany na malaza amin'ny ankapobeny. Raha manaraka azy izy dia mety hahazo tombony bebe kokoa amin'ny fiezahana hanaraka ny hetsik'ireo mpilalao lehibe, izay azo atao amin'ny alalan'ny fandikana araka ny tokony ho izy ireo tatitra ara-toekarena isan-karazany, toy ny isan-kerinandro COT ny tatitra, izay mampiseho ny fitongilanana fitaratry ny mpivarotra lehibe eo amin'ny mpivarotra vola samy hafa.
Azonao atao ihany koa ny manara-maso ny hetsika ataon'ireo mpivarotra lehibe amin'ny fanarahana ny vidin'ny asa amin'ny sarintany lehibe kokoa. Ny efamira ambony kokoa, toy ny ora efatra sy ny diary isan'andro, dia maneho ny fikasan'ireo mpilalao lehibe kokoa. Azonao atao koa ny manandrana manohitra ny fahatsapan'ny mpilalao kely. Ny tsara indrindra dia tokony hampivelatra ny rafi-pifandraisan-tsainao manokana ianao miaraka amin'ireo singa maromaro ao anaty rindrina izay manana ny sisiny ho an'ireo mpivarotra lehibe sy madinika ary tokony halefa amin'ny famaizana na hampiasaina ity rafitra ity. Momba izany bebe kokoa amin'ny fizarana manaraka.
Famonoana avy hatrany ambony
Fandraharahana momba ny famatsiam-bola
Mpandray anjara Liquidity
Iza no mandany vola vahiny?